बिचित्र संसार(Strange World)
लण्डन । २७ वर्षकी लौरा टेक्सीरिय हरेक महिना महिनावारीको क्रममा श्राव हुने रगत जम्मा गरेर उनी आफ्नो अनुहारभरि पोत्छिन् । त्यसपछि बाँकी भएको रगतलाई पानीमा मिसाएर आफूले रोपेका बोट बिरुवामा हाल्छिन् । ‘सिडिङ् द मून’ नामको यो प्रथा विभिन्न पुरानो मान्यतासँग प्रेरित छ जसमा महिनावारीको रगतलाई उर्वरताको प्रतिकको रुपमा हेरिन्थ्यो । यो...
एजेन्सी– नर्वेमा युरोपको पहिलो अन्डर वाटर रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको छ । एक सय जना मानिसले एकसाथ लन्च वा डिनर गर्न सक्ने यो रेस्टुराँमा ४० जना मानिसले रात समेत बिताउन सक्ने व्यवस्था छ । समुद्र मुनी ३४ मिटर लामो तथा १५ मिटर चौडा काँचको पर्खाल निर्माण गरेर तयार पारिएको यो रेस्टुराँको माथिल्लो भाग एउटा सडक मार्फत मुख्य भूमिसँग जोडिन्छ...
एजेन्सी । ह्वेल माछाको प्रजाति हो । यो ठूलो माछा हो । तर, ह्वेल माछा मात्र पनि होइन । यो मानिससँग पनि नजिक छ । ह्वेल आफंैमा स्तनधारी प्राणी हो । पोथी ह्वेलले बच्चा जन्माउँछ र बच्चालाई दूध चुसाएर हुर्काउँछ । मानिस पनि स्तनधारी प्राणी हो । मानिस र ह्वेलका बीचमा रहेका धेरै भिन्नतामध्ये ह्वेल पानीमा बस्नु र मानिस जमिनमा बस्नु पनि एक हो । तर,...
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला संसारका धनी व्यक्तिले पनि जुठो भाँडा माझ्छन् भन्ने ? धनाढ्यहरुसँग खर्च गर्न पर्याप्त पैसा हुन्छ, त्यसैले उनीहरु आफूले चाहेको सबै सामान किन्न सक्छन् र घरमा जोसुकैलाई काम लगाउन पनि सक्छन् । तर, उनीहरुको जीवन आरामसँग बित्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस् । संसारको सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिको सूचीमा आउने अमेरिकी प्राविधिक...
काठमाडौं । संसारमा अचम्मका समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । बिहे गरेको एक जोडीले पहिलो पल्ट यौनसम्पर्क गर्दा पाँच पलङ भाँचेका छन् । यो समाचार नेपालको नभएर अमेरिकी राज्य ओहियोस्थित डबलिनमा बस्ने एक जोडीको हनिमुन गज्जबको भएको छ कि जहाँ उनीहरुले पाँच–पाँच पलङ तोडिदिएका छन् । मोटो शरीर भएका उनीहरुले यौनसम्पर्क गर्न खोजेकै कारण पलंङ...
काठमाडौं । प्रेमीसँग यौनसम्पर्क गर्दा गर्दै युवकको लिंग भाँचिएको छ । सहवासलाई एडभेन्चर ठानेर विभिन्न आसनमा जोडतोडका साथ सहवास गर्ने हुँदा एक पुरुषले नराम्रो परिणाम भोग्नुपरेको छ । असजिलो आसनका साथ आफ्नी प्रेमिकासँग सहवास गर्दा ती पुरुषको लिंग नै भाँचियो र उनलाई अस्पताल कुँदाउनुपर्यो । घटना भियतनामको हो । डाक्टरहरुका अनुसार ती...
काठमाडौं । बैध तथा अवैध तरीकाले पोर्न फिल्म उद्योग संसारभर नै फैलिइरहेको छ । हालै बिजनेश इन्साइडरले पोर्न स्टारले के कति कमाउँछन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । निक्की बेन्ज नाम दिइएकी युक्रेनी क्यानेडियन पोर्न स्टारको कूल नेटवर्थ मात्रै १० लाख अमेरिकी डलर रहेको उसले उल्लेख गरेको छ । त्यो भनेको नेपाली रुपैयाँमा रु १० करोड बढी हो । उनले सन्...
एजेन्सी । म्यान्मारकी एक महिला डाक्टर नांग मी सानको आफूले लगाएको बिकिनीको फोटो शेयर गर्दा उनको डाक्टरको लाइसेन्स नै भएको छ । डाक्टर नांग मी सानले लाइसेन्स फिर्ता लिने काउन्सिलको निर्णयलाई गलत बताउँदै यसको कडा विरोध गरेकी छिन् र यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा दखलको संज्ञा दिएकी छिन् । २९ वर्षकी डाक्टर नांग मी सानले आफ्नो सोसल मिडिया...
नयाँदिल्ली । अहिले भारतीय पधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेकअप गरिरहेको एक भिडियोले भारतमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ध्यान तानिरहेको छ । केही मेकअप आर्टिस्ट प्रधानमन्त्री मोदीको वरिपरि देखिन्छन् । अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो भिडियो शेयर गर्दै मोदीको मेकअपमा मासिक ८० लाख भारतीय रुपैंया खर्च हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्...
एजेन्सी । चीनमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ मृतकको अन्त्येष्टिको बेला उसका परिवारहरु नाचगान गर्दछन् अनि त्यसक्रममा अश्लील नाच पनि देखाइन्छ । चीनका कतिपय ग्रामीण इलाकामा अन्तिम संस्कारको बेला युवतीहरुको अश्लील नाचको आयोजना गर्ने परम्परा रहेको छ । सदियौँदेखि चलिरहेको यो परम्पराले समयसँग आधुनिक रुप पाएको छ । महिलाहरुले आफ्नो पतिको...
एजेन्सी । तपाईंलाई आफ्ना बच्चा रोएको मन पर्छ ? यो प्रश्नमा धेरैजनाको जवाफ पक्कैपनि ‘पर्दैन’ भन्ने नै हुन्छ । तर, जापानमा भने एक यस्तो परम्परा छ जसमा बच्चालाई धेरै भन्दा धेरै रुवाइन्छ । अझ रोचक कुरा त के भने धेरै रुन सक्ने बच्चाका अभिभावकले पुरुस्कार समेत पाउँछन् । जापानको राजधानी टोकियो नजिकैको आसाकसामा मनाइने ‘नाकी सुमो’ नामक यो...
एजेन्सी । घडी लगाउनमा हामीमध्ये सबै सौखिन नै हुन्छौ । नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै बजारमा धेरै थरिका घडी पनि पाइन्छन् । हामी घडी किन्छौ लगाउँछौ । र छिनछिनमै समयपनि हेर्छौ । तर एउटा कुराको याद सायद हामीमध्ये कमैले गरेका होलाउँ । डिस्प्लेमा राखिएका घडीहरुमा कति बजेको हुन्छ भनेर । त्यो भन्दा बढी हामी घडीको डिजाइन र मूल्यमा नै केन्द्रित हुन्छौ...
एजेन्सी । आजकाल स–सानो कुरामा सम्बन्ध टुट्ने स्थितीमा पुग्छ । सम्बन्धविच्छेदका विभिन्न किस्सा त तपाईंले सुन्नुभएकै होला तर मध्यप्रदेशको पारिवारिक अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको एउटा यस्तो मामला सार्वजनिक भएको छ जसले तपाईंलाई आश्चर्यमा पार्नेछ । सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा श्रीमतीले श्रीमानको रहन–सहन चित्त नबुझेको बताएकी छिन् ।...
एजेन्सी । जलवायु परिवर्तनको विरोध गर्ने एक समूहले अर्धनग्न भएर बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा गत सोमवार साँझ प्रदर्शन गरेका छन् । सांसदहरूले ब्रेक्जिटका विषयमा बहस गरिरहँदा प्रदर्शनकारीहरू पब्लिक ग्यालरीमा प्रवेश गरेका थिए । एक्सटिंक्सन रिबेलियन ग्रूपका ११ कार्यकर्ताले भित्री कट्टु मात्र लगाएर शरीरमा वातावरणवादी नारा...
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एकजना व्यक्तिले झण्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम क्षतिपूर्ति माग गर्दै आफ्नै सहकर्मी विरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । यसरी मुद्दा हाल्नुको कारण रहेको छ, ती सहकर्मीको पाद । पेशाले निर्माण इन्जिनियर रहेका ती व्यक्तिको आरोप छ कि उनका ती आरोपित सहकर्मी हरेक दिन कार्यालय समयमा उनको कोठामा पटक पटक आएर...